Salama, azafady, misy vaovao iray ho anay sy ianao roa lahy, namolavola fanitsiana fomba roa samy hafa izahay. Sary ho an'ny firesahana ho,
Ireo vokatra vaovao ireo dia tena mahazo aina rehefa mitafy, ary tena mahomby amin'ny postur mpanitsy.
NY FIVAVAHANA MANOKANA & FAMPIASANA ZAVA-PITOMPOANA AN-TRANO & MPIASA - Mipetraka eo anoloan'ny solosaina mandritra ny ora maromaro ve ianao sa misy tsy fahatomombanana sy fanaintainanao ao an-damosinao sy soroka? Aza manahy; Midika izany fa miasa ny lamosin'ny lamosina ary manamboatra ny hazondamosinao amin'ny tokony ho izy! Ny mpanitsy ny posture dia manome ny fanohanana ilaina indrindra ny vatanao mba hanampy anao hanatsara ny fahasalamanao amin'ny ratra amin'ny ankapobeny.
NY FAHASALAMANA SY NY FAMPIASANA: Miorina amin'ny famolavolana Ergonomika, ny fatran'ny posture dia ahafahanao mivoatra ny lamosina mahitsy ary manamafy ny soroka, nyzanao ary ny lamosinao, ny fananganana tsanganana tsara, manatsara ny fanaintainana amin'ny vozonao, ny soroka, ny lamosina ambony ary ny fanovana ny fahazaran-dratsy ao. slouching. Na mila mitrosa amin'ny ratra iray ianao na te hanatsara ny posture, eto no misy ny SR hanampy anao. Ampiasao ny kofehy fanitsiana posture mba hampiorina ny vertebrae, hanamafy orina ny hozatrao, ary ho sitrana ny fanivanana!
RANOMPOANA FAMPISOROSANA FAMPISORANA: MP mpanitsy ny posture, mampiasa fitaovana maivana, malefaka ary manaparitaka ny hoditrao. Ny akanjon'ny posture vita amin'ny fitaovana marefo marefo izay tsy ho voamarika ambanin'ny akanjo. Ny fehikibo clavicle dia tsy miteraka aretin-koditra na hatsembohana, azo anaovana trano any an-trano, any am-piasana na amin'ny gym.
TOKONY FAMPISOLANA FOTOTRA FOTOTRA: Lehibe Universal. Ny kiraro aoriana manitsy dia manana kofehy azo zahana noho ny alàlan'ny tanora sy ny lehibe, ny lehilahy ary ny vehivavy. Ao amin'ny fantsom-peo 33 "- 47". Izao fa efa nihatsara ny halavanao ary mihamafy ny hozatry ny lamosinao, manana dingana fanampiny ianao. Ampiasao hanarenana ny fanolorana olona ary hamita ny fanasitranana ho anao!
Fa maninona no manan-danja ho an'ny lehilahy sy vehivavy ny mpiadidy posture?
Miasa ho toy ny clavicle bracezy hanome fanampiana clavicle posture rehefa miasa, misandratra, mipetraka eo amin'ny latabatra solosaina, miasa any amin'ny birao, sns.
Manatsara ny fitadidiana sy ny fianarana & Mahatonga anao ho lava volo, malefaka kokoa ary mahasarika.
Mahatonga anao ho matoky tena sy matanjaka & manatsara ny fanovana vatana amin'ny fanafoanana ny fanaintainan'ny lamosina sy ny tendany ary manatsara ny fofon'aina.
Mora hitafy akanjo ambanin'ny lobaka iray rehefa any am-piasana ary tsy hita maso ambany ny akanjonao.
Nohavaozina ny mpanitsy ny fanaintainan'ny tsimok'aretina izay manakana ny fikosoham-bary sy ny fisavoritahana ary manome fanitsiana ny soroka.
Ny brace fracture fracture voatanisa vita amin'ny neoprene maivana maivana sy avo lenta.
Ahoana ny hanohizanao ny fanitsiana ny lamosinao, hahazoana ny fisehoana voajanahary?
Tsotra fotsiny, hanomboka mitafy izany mandritra ny 20-30 minitra, atombohy amin'ny fotoana manitatra ny fotoana lanjan'ny fitafiana amin'ny 5-10 minitra ary mitombo amin'ny 1 ora isan'andro.
Amin'izany no mahatonga ny posturo ho tonga lafatra ary tsy maintsy hitafy izany indraindray.
Miandry ny vaovao avy aminao ary hiezaka araka izay tratry ny herinay mba hananana fampahalalana ilainao.
Avereno indray, manantena izahay rehetra fa afaka mandroso miaraka amin'ireo vokatra ireo ary manantena fa hahazo fizarana bebe kokoa amin'ny tsenanao ianao.